Daawo: Farmaajo: Dalkaan waxaa isku haysta laba afkaar oo kala ah waddaniyad iyo... - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Farmaajo: Dalkaan waxaa isku haysta laba afkaar oo kala ah waddaniyad...
Daawo: Farmaajo: Dalkaan waxaa isku haysta laba afkaar oo kala ah waddaniyad iyo…
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad ka jeediyay munaasibadii 1-da Luulyo ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah.
Farmaajo ayaa khudbadiisa isku dul-taagay ‘waddaniyada’ oo uu sheegay inay soo noqotay muddooyinkii dambe, asaga oo tusaale usoo qaatay dhalinyaro badan oo sanadkaan u dabaal-dagayey munaasibada 1-da Luulyo.
Waxa uu ka dhawaajiyey in dalka ay isku hayaan labo qolo, kuwaasi afkaaro kala duwan ah oo Waddaniyada iyo Qabyaalada, islamarkaana ay tahay in uu muwaadinka kala doorto, isagoona xusay in qaybaalada kala qeybsanaanta ay keentay ka faa’iideysanayaan cadowga dalka, sida uu sheegay.
“Dalkaan waxaa isku haysta afkaar dad maaha, labo afkaar ayaa isku haysata, anaga ayaa nalaga rabaa midda aan qaadan laheyn, Ilaahay waxa uu ina-siiyey in aan kala doorano, midka aad qaadato waxa uu leeyahay dhibaatadiisa midna wuxuu leeyahay wanaagiisa. Labada afkaar ee dalkaan isku haysatay waxay ahaayeen Waddaniyada iyo Qabyaaladda,” ayuu yiri.
“Qabyaaladu umaddeeni waa kala qeybisay, waxayna dhigtay Afrika meesha ugu hooseysa, caddowgeenii iyo shisheeyihii waxay siisay fursad ay nagu sii kala qeybiyaan oo nagu maamulaan.”
“Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaan aragnay wadaniyadii oo soo noolaatay. Ogaada dagaalkii waa socdaa! Hadda rajo ayaa ii muuqata in wadaniyadii ay xoogeysaneyso, qabiilkiina uu jabaayo.”
Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in qabyaalada ay tahay mida dib u dhaca ku keentay dalkeena.
Munaasibada 1-da Luulyo ayaa si weyn looga xusay magaalada Muqdisho, ayada oo lagu qabtay munaasabadda dabaal-degaas xarunta Tiyaatarka Qaranka.